Crisis Camp Italia: Mampiasa Web 2.0 Hiatrehina Ny Vonjy Taitra · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Ciara Nugent
Voadika ny 20 Aogositra 2017 13:42 GMT
Taorian'i Parisy [fr] – Bologna. Mahazo vahana any Italia ny Crisis Camp [it] ,toy ny tambajotra Eoropeana izay niparitaka nandritra ny volana vitsivitsy lasa, ary manana tanjona fototra “handray andraikitra miaraka amin'ny teknolojia vaovao izay ho afaka ampiasaina amin'ny fitantanana toedraharaha anaty haterena sy krizy”.
Nanjary azo tanterahana ireny teknolojia iaraha-mifandrimbona ireny noho ny firongatra sy fanatsarana ireo fampiasa Web 2.0 izay mora idirana sy ampiasaina.
Ny filozofia (eo amin'ny hevitra sy amin'ny fampiharana) izay ifotoran'ireo rindrambaiko ireo dia ny fifarimbonana, izany hoe, fandraisana anjara mavitrika sy mivantana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina. Fa inona anefa ny Crisis Camp? Manondro fihaonambe iray tsy ara-potoana izany, amin'ity tranga ity dia BarCamp iray voatokana ho an'ireo loharano ao amin'ny aterineto natao hanampy hitantanana krizy isan-karazany, miainga avy amin'ireo toejavatra an-katerena natray ny loza voajanahary ka hatramin'ireo fifandonana sy ny ady ara-politika sy firoarana ara-tsosialy.
Fametrahana ho anaty sarintany, fanarahandia, fanaovana gazetim-bahoaka; fitantanana tahirin-kevitra: ireo no anisan'ny lohahevitra izay hifanakalozana hevitra any Bolonina [it] amin'ny 19 Novambra 2011. Azo jerena ato [it] ny fandaharanasa. Asaina ny tsirairay mba hanolotra lohahevitra hifanakalozana hevitra amin'ny alalan'ny famenoana taratasy iray fangatahana amin'ny aterineto [it]
Taorian'ny fahombiazan'ny sehatra fiarahamiasa toy ny Ushahidi sy ireo hafa fampiasa Web 2.0 isankarazany, ny fampiasana ny haino aman-jery sosialy sy ny fampandraisana anjara mivantana ireo olom-pirenena dia nanjary fitaovana manokana hiatrehana ny tranga manahirana tsy mitsaha-mitombo, toy izay asehon'ny fandraisana andraikitra nipetraka tamin’ny tondradrano vao haingana tany Tailandy, ary izay nahariharin'ny firoboroboana iraisam-pirenen'ny tambajotra Crisis Commons.
Nanontany an'i Elena Rapisardi [it] izahay, mpanomana tetikady amin'ny vohikala ary mpanohana mavitrika ilay hetsika, fanontaniana vitsivitsy mba hifantohana kokoa amin'ilay fivoriana any Bolona.
Global Voices (GV): Nahoana no napetraka ny Crisis Camp, inona avy ireo tanjony ary inona avy ireo drafitra ho amin'ny hoavy?
Elena Rapisardi (ER): Manana tanjona hampivondrona ny olona izay miatrika ny krizy, ny vonjy taitra ary ny loza mety hitranga ny Crisis Camp, ary mahita ao amin'ny Web 2.0, fomba sy fitaovana ilaina indrindra ho an'ny fitantanana ary fisorohana ny krizy. Hametraka tambajotra no tena tanjona. Tambajotranà olona izay mitovy tanjona sy fotokevitra, toy ny fiarahamiasa sy faharetana. Ny krizy, vonjy taitra, ary ny loza mety hiseho dia afaka sorohana ihany, tantanana ary resena amin'ny alalan'ny fampiroboroboana vondrom-piarahamonina matanjaka sy mandray andraikitra izay manana fahafahana hampandray anjara ireo hery rehetra, manomboka any amin'ny vondrom-piarahamonin'ny mpahay siansa hatramin'ny olom-pirenena, ary koa ireo andrim-panjakana, ny haino aman-jery ary ireo manam-pahaizana. Noho io antony io, mino aho fa izay Crisis Camp atao any Italia, toy izay natao tany Parisy sy ny toerana hafa manerana izao tontolo izao, dia tsy maintsy ihany koa mandinika ny fomba anombohana mametraka rohy miaraka amin'ireo rafitra fihetsehna efa misy. Fanamby sarotra satria mila asa maharitra ary mitaky fandavantena, avy amin'ny roa tonta, mba hahatakatra ny filàna ary hahita fitaovana ifampizaràna ho an'ny fiarahamiasa.
GV: Na any Italia aza, araka izay nasehon'ilay tondradrano niseho tsy ela akory izay tany Ligoria, misy ve filàna fitaovana mahomby sy vonona horaisina avy hatrany, hahafahana miatrika ny vonjy taitra? Ary tena vonona ny handamin-javatra miainga avy ao amin'ny Aterineto ve ny olona?
ER: Eo amin'ny lafiny ara-teknolojia, misy maro any Italia ihany koa ireo fampiasa tena ilaina. Nefa mino aho fa mila fiovana ara-kolotoraly ambonin'ny zavatra hafa rehetra izany zava-baovao amin'ny sehatry ny fitantanana ny hamehana sy ny krizy izany mba hahafahan'ny teknolojia maka ny toerany, nefa koa tsy tokony ho lasa fiafaràny no sady tsy tokony hitarika ho any amin'ny fifaninanana. Misy ny teknolojia maimaimpoana sy mivelatra, maro ireo tetikasa amin'ny loharano misokatra. Angamba ilaina ny fandraisana an-tànana ny fenitra, ireo angon-drakitra misokatra sy ny “fampiasana” isanandro ny aterineto, ary na ny fampianarana aza, satria ny fidirana amin'ny aterineto dia tsy midika avy hatrany ho fahaizana mikirakira aterineto. Ny marina anefa, na izany aza, mba hikisahana ho aminà fandraisana anjara mavitrika sy am-pisainana dia ilaintsia ny miala amin'ilay firotsahana entin'ny fihetsehampo izay mahatonga antsika handefa sary amin'ireo naman-tsika sy ireo “mpankafy”, mba hizaràna fihetseham-po. Tsy fiovana mora no hatao, nefa ny fivoriana toy ny Cirisis Camp dia mety hampiray ny hery, ny traikefa ary ny herijika ka hanampy amin'ny fiovàna. Mino aho fa hetsika toy ny fampiasana ny sarintany mba hanangonana porofo hita maso tamin'ilay tondradrano vao haingana tany Ligoria, nokarakarain'ny biraon'ny “La Reppublica” any Genoa sy Livorno, ary niarahany niasa tamin'ny Departemantan'ny Siasa momba ny Tany tao amin'ny Anjerimanontolon'i Turin sy NatRisk, dia dingana voalohany ho amin'ny fiarahamiasa amin'ny vondrom-piarahamonina mpahay siansa sy ny haino aman-jery. Misy fomba vaovao entina mamokatra fampahalalam-baovao ary fitsipika vaovao tokony ianarana. Tsy mino vahaolana eo no ho eo aho, tsy resaka “tsindrio eto” fotsiny ny aterineto fa mihoatra lavitra noho ny “tsindrio”.
GV: Amin'ny sehatra maneran-tany kokoa, toa malalaka kokoa ny fampiasana ireo fampiasa toy ny Ushahidi, nefa tena manampy be tokoa ve ireo fampiasa ireo sa manampy amin'ny fampijanonana ny famoronana tsaho, tsy fahatokiana ary ny fitobahan'ny vaovao be loatra?
ER: Ny maha-azo itokisana ny fanazavana nangonina avy amin'ny haino aman-jery sosialy na ny hetsika toy ny fifindrimbonana manao sarintany, dia tena olana izay tsapan'ireo VTCs rehetra [Vondrom-piarahamonina Teknikan'ireo Mpilatsaka an-tsitrapo] ary misy tetikasa efa tafapetraka hamaritra sy hametraka ny maha-azo itokisana ireo mpandray anjara. Izaho manokana mihevitra fa mila eritreretintsika ny atao hoe fahavononana, ny “fidirana” ao amin'ny Aterineto, ary ny fametrahana ny laza sy ny toerana. Tsy misy azo lazaina ho tsy mhafantatra ny tranga ara-tsosialy sy ara-pifandraisana izay tsy inona fa ny haino aman-jery sosialy. Tsy azo heverina ny hanilika na hifehy azy io. Hotohizan'ny olona ny fibitsihana (Twitter) sy ny fandefasana lahatsoratra ao amin'ny Facebook. Izany no antony tsy maintsy itsofohantsika ao amin'ilay renirano ary “miaraka miasa” mba hamoronana sehatra ifampizaràna, ho lasa feo iray azo itokiana sy ekena. Ireo ohatra roa mahaliana dia ny INGV sy ny Consorzio Lamma Toscana [it], izay samy hita maharitra ao amin'ny Twitter, ary mampiasa azy io ho toy ny fitaovam-pifandraisana voalohany indrindra. Ilaina arahana ireo hetsika ary natao mifanaraka amin'ny fizotrany eny ny fandraisana anjara. Tena azo antoka fa asa tsy mora izany, satria ny fifandraisana dia fandraisana andraikitra iray, ary mangataka hafainganam-pandeha sy toe-tsaina “ara-potoana” izay tsy afaka atrehin'ny rafitra fitantanana torohay napetraky ny fikambanana sasany, tsy misy lolompo, na, fara fahakeliny, tsy antenaiko, fa noho izy ireo tsy manana fahafahana ampy hitantànana tsara araka ny tokony ho izy ny vaovao “taorian'ny revolisiona Gutenburg”, izany hoe, ny vaovao izay haingana kokoa, ara-potoana sy mibosesika.
Ho fanavaozam-baovao momba ny Crisis Camp Italia sy ireo fivoaran-draharaha mifandraika aminy; afaka tsidihinao ny tranonkala ofisialy [it] ary araho ny tenifototra #crisiscampit ao amin'ny Twitter